Government sends Thai Airways to Bankruptcy Court | Airline News
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovaon'ny seranam-piaramanidina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Raharaham-panjakana • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Other • Olona manao vaovao • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Safety • Vaovao momba ny dia any Thailandy • Vaovao momba ny fizahantany • Vaovao momba ny fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News • Vaovao mivalona
Nandefa ny Thai Airways tany amin'ny fitsarana bankiropitra ny governemanta
Ny praiminisitra Prayut Chan-o-cha dia nanambara ny fanapahan-kevitry ny kabinetra fa hametraka bankiropitra ny Thai Airways International, ao amin'ny Government Government any Bangkok ny talata
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fiaramanidina » Nandefa ny Thai Airways tany amin'ny fitsarana bankiropitra ny governemanta
Ny kabinetra tamin'ny talata dia namaha izany vola izany Thai Airways International (THAI) dia hametraka amin'ny fatiantoka any amin'ny Central Bankruptcy fitsarana mba hanatanterahana ny fanarenana azy araka ny Bangkok Post.
Voalaza fa nilaza ny praiminisitra Prayut Chan-o-cha fa io no làlana tsara indrindra hanampiana ny zotram-piaramanidina mikorontana hiverina amin'ny tongony. Raha ny drafitra fanarenana dia tsy hahazo fanampiana ara-bola avy amin'ny governemanta ny THAI ary tsy horoahina ny mpiasan'ny mpikambana 20,000 XNUMX aminy.
"Fanapahan-kevitra sarotra izany saingy tombontsoam-pirenena sy ho an'ny besinimaro io," hoy izy.
Ny safidy roa hafa notapahan'ny governemanta dia ny:
Mitady vola amin'ny zotram-piaramanidina
Avelao ho faty irery izy
Ireo safidy roa ireo dia nolavina hisafidy fa tsy hanao fatiantoka amin'ny bankiropitra any amin'ny Central Bankruptcy. Manana ny 51 isan-jaton'ny kaompaniam-pitaterana ny minisiteran'ny vola Thai.
Nilaza ny praiminisitra fa sarotra ny mamerina amin'ny laoniny ny THAI satria misy fameperana araka ny lalàna mifehy ny asa sy ny orinasam-panjakana.
Ny fandefasana ny zotram-piaramanidina any amin'ny tribonaly banky foibe no safidy tsara indrindra ary hisy ny fomba fiasa manaraka mba hamahana ireo olana anatiny ao amin'ilay orinasa, hoy i Gen Prayut.
“Androany izao tokony hanehoana herim-po hiatrehana ny fizotran'ny fanarenana any amin'ny fitsarana. Miatrika krizy i Thailand sy ireo firenena manerantany. Thailand dia tsy maintsy mandany vola hanampiana ny olona, ​​ny tantsaha, ny SME, ny karama, ny olona miasa irery ary ireo izay miasa mafy ho an'ny fianakaviany, "hoy izy.
“Mbola tsy vita ny olan'ny Covid. Ny olana matotra indrindra dia ny fahaveloman'ny mponin'i Thailand. Tsy fantatro hoe rahoviana izy ireo no afaka miverina amin'ny asa mahazatra. Krizy hitohy amin'ny ho avy io. ”
Mandà hatrany ny THAI fa miaro ny fatiantoka izy ireo saingy mazava ny governemanta. Na izany aza dia nilaza i Gen Prayut fa hanohy hiasa ny THAI.
“Miaraka amin'ny fitantanana matihanina dia hahazo ny heriny indray izy io. Ireo mpiasa ao aminy dia hitazona ny asany ary hamboarina indray. Hanapakevitra ny pitsopitsony ny fitsarana, ”hoy izy.
TTRWeekly famoahana iray monina any Thailandy nanomboka tamin'ny 1978 dia nitatitra am-pahibemaso Thai Airways International Public Company Limited fa tsy misy fikasana hanao fatiantoka amin'ny fanambarana an-gazety sy lahatsoratra Facebook.
Nilaza ny kaompaniam-pirenena fa mamaly ny tsaho amin'ny haino aman-jery eo an-toerana sy ny media sosialy nipoitra ny faran'ny herinandro teo taorian'ny fivorian'ny filankevi-pitantanana natao ny 15 Mey lasa teo. Nandritra ny fanoherana ofisialy azy dia nilaza ny kaompaniam-pitaterana fa ny “drafi-panavaozana dia nankatoavin'ny talen'ny THAI tamin'ny 17 aprily ary natolotra ny biraom-panjakana momba ny politikan'ny fanjakana mba hodinihina ny 29 aprily 2020.
"Tapa-kevitra ny THAI fa hanao izay rehetra azo atao mba hialana amin'ny krizy," hoy ny filoha lefitra faharoa ary ankehitriny ny filoha mpisolo toerana. THAI dia naneho ny fankasitrahany ireo mpandray anjara rehetra ary nanampy fa hanohy ny asany tanteraka izy ireo aorian'ny Covid-19 milamina ny toe-javatra. Nanampy ny zotram-piaramanidina fa mbola manan-kery ho an'ny dia ny tapakila an'habakabaka THAI ary ny mpandeha mitazona ireo tapakila ireo dia ampirisihina hifandray amin'ny THAI amin'ny tranokala.
Araka ny Stock Exchange of Thailand, ny fananan'ny THAI dia voarakitra 256 245 baht tamin'ny faran'ny taona lasa raha 21 miliara baht kosa ny trosany. Niakatra ho 1: XNUMX ny tahan'ny trosa-amin'ny-fananan'ilay zotram-piaramanidina.
THAI dia nandrakitra fatiantoka 11.6 miliara baht tamin'ny taona 2018 ary 12 miliara baht tamin'ny taona 2019. Nandritra ny tapany voalohany tamin'ity taona ity, novinavinaina hanoratra fatiantoka 18 miliara baht ny zotram-piaramanidina noho ny fiantraikan'ny krizy COVID-19.
“Hatolotra ny filankevitry ny governemanta ny drafitra atsy ho atsy mba hanaovana hetsika fanampiny. Ny filankevi-pitantanana dia tsy nametraka fanapahan-kevitra hametrahana bankiropitra araka ny hita tamin'ny vaovao. Mandà indray ny tsaho momba ny fatiantoka i THAI ”, hoy ny vakiteny.
Ny filoham-pirenena THAI, Chakkrit Parapuntakul, dia nilaza fa tsy ho rava ilay kaompaniam-pitaterana an-tsambo ary tsy ho ravana na hotorina banky fa hanatanteraka tsara ny drafitra fanarenana azy. Miandry ny fizotran'ny fanarenana dia hitohy amin'ny serivisy mahazatra ny zotram-piaramanidina, hoy izy.